संक्रमित बढ्दै, लक्षणसहितका न्यून – Sajha Bisaunee
संक्रमित बढ्दै, लक्षणसहितका न्यून
संक्रमित दुई हजार पाँच सय ९८ पुग्दा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । प्रदेशमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको दर शून्य दशमलव २३ प्रतिशत छ । ९८ प्रतिशत संक्रमित लक्षणविहीन छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का लक्षणसहितका संक्रमितको संख्या न्यून छ । चिकित्सकहरूका अनुसार प्रदेशमा कोरोना पुष्टि भएर अस्पताल भर्ना हुने झण्डै ९८ प्रतिशत संक्रमित लक्षणविहीन छन् ।
शनिवारसम्म प्रदेशभर संक्रमितको संख्या दुई हजार पाँच सय ९८ पुगेको छ । यीमध्ये गम्भीर प्रकृतिको केस भएका संक्रमित भने नभएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा हालसम्म तीन सय ९८ जना कोरोना भाइरसका संक्रमितहरू भर्ना भएको तथ्याङ्क छ । तीमध्ये एक जना संक्रमितलाई पनि सघन उपचार कक्ष आईसीयू र भेन्टिलेटरमा राख्नु परेको छैन । अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन डा. प्रदीप न्यौपानेले हाल अस्पतालमा उपचाररत ७५ जना संक्रमितमध्ये चार जनालाई मात्र सामान्य टाउको दुख्ने लक्षण देखिएको बताए । अन्य सबै संक्रमितको अवस्था सामान्य छ ।
‘अहिलेसम्म कुनै पनि संक्रमितलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपरेको छैन,’ उनले भने, ‘कोरोना पुष्टि भएकाहरूमा लक्षण नै देखिने गरेको छैन । सामान्य टाउको दुख्ने र रुघा लाग्नेबाहेक अरु लक्षण छैन ।’ प्रदेश अस्पतालमा कोरोना संक्रमितका लागि आठ वटा बेडको भेन्टिलेटर व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, सुर्खेत जिल्लाभर शनिवारसम्म एक सय २७ जना संक्रमित रहेका छन् । जसमध्ये प्रदेश अस्पतालमा ७५, वीरेन्द्रनगर आइसोलेसनमा २१, होम आइसोलेसनमा १६, वीरेन्द्रनगरस्थित एक होटेलको आइसोलेसनमा चार, चिङ्गाड गाउँपालिकाको आइसोलेसनमा दुई र गुर्भाकोट आइसोलेसनमा नौ जना संक्रमित रहेका छन् । यीमध्ये कसैलाई कोरोनाको लक्षण भने देखिएको छैन ।
दैलेख अस्पतालमा समेत हालसम्म कुनै पनि कोरोना संक्रमितलाई भेन्टिलेटर तथा आईसीयूमा राख्नु नपरेको अस्पताल प्रमुख डा. निरञ्जन पन्तले जनाए । उनले कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याइएका दुई वटा भेन्टिलेटर र पाँच वटा आइसोलेसनमा संक्रमित भर्ना गर्न नपर्नु सुखद् भएको बताए । दैलेख जिल्ला अस्पतालमा १८, दुल्लू अस्पतालमा पाँच, भैरबी आइसोलेसनमा सेन्टरमा दुई, चामुण्डाविन्द्रासैनी आइसोलेसनमा चार, ठाटीकाँधमा एक र महावुमा एक गरी जम्मा ३२ जना संक्रमित उपचाररत रहेको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले जनाएको छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका निर्देशक डा. मंगल रावलले हालसम्म कुनै पनि कोरोना संक्रमितलाई आईसीयू तथा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नु नपरेको बताए । ‘२९ जना संक्रमित अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ,’ उनले भने ‘तर कसैलाई पनि गम्भीर समस्या देखा परेको छैन ।’ उनले लक्षणसहित आएका भनिएका संक्रमितलाई समेत सामान्य रुघा मात्रै देखिएको बताए ।
प्रदेशका डोल्पा, मुगु र हुम्ला कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् । त्यहाँ केही व्यक्तिमा देखिएको संक्रमण निको भएपछि नयाँ संक्रमित भेटिएका छैनन् । डा. रावलले बाहिरबाट आउने संक्रमितहरू सुर्खेत, जुम्लाका विभिन्न स्थानमा आइसोलेसनमा बसी संक्रमणमुक्त भइ गाउँ आउने गरेकाले यी जिल्लामा संक्रमण फैलिन नपाएको बताए । हालसम्म प्रतिष्ठानमा मात्रै भर्ना भएका संक्रमितको संख्या एक सय २० भन्दामाथि छ । ‘समुदायमा भर्खरै संक्रमण फैलिन थालेको छ’, उनी भन्छन्, ‘समुदायमा संक्रमण फैलिएपछि भेन्टिलेटर र आईसीयूमा संक्रमित आउँछन् ।’ डा. रावलले हाल अधिकांश युवा उमेर समूहमा संक्रमण पुष्टि हुँदै गएकाले थप जटिल परिस्थिति आउन सक्ने औंल्याए । समुदाय संक्रमण व्यापक भए वृद्ध तथा दीर्घरोगीलाई समेत संक्रमण फैलिने खतरा हुने उनको तर्क छ ।
जुम्ला हाल कोरोनाका ८८ जना संक्रमित छन् । त्यस्तै जाजरकोटमा ११, सल्यानमा १५, रुकुम–पश्चिममा नौ र कालीकोटमा २० जना संक्रमित छन् । उनीहरूमध्ये कसैलाई पनि कोरोनाको गम्भीर लक्षण देखिएको छैन । प्रदेशमा पहिलो पटक गत जेठ ५ गते दैलेखको आठबीस नगरपालिकाका ३५ वर्षीय युवालाई संक्रमण देखिएको थियो । भारतबाट फर्किएका ती युवालाई समेत कोरोनाको लक्षण नदेखिएरै संक्रमणमुक्त भएका थिए । प्रदेशमा पछिल्लो समय कोरोनामुक्त हुनेको संख्या पनि बढ्दो छ । हालसम्म प्रदेशभर दुई हजार दुई सय ८१ जना कोरोनामुक्त भइसकेका छन् । शनिवार मात्रै ४२ जना संक्रमणमुक्त भएको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले जनाएको छ । प्रदेशमा हालसम्म सबैभन्दा बढी दैलेखमा एक हजार ४८, सुर्खेतमा सात सय १४, सल्यानमा दुई सय ७३, जुम्लामा एक सय ७७, कालीकोटमा एक सय १०, रुकुम–पश्चिममा ६३, जाजरकोटमा ५५, मुगुमा १०, हुम्लामा ६ र डोल्पामा पाँच जनालाई संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । तीन जिल्ला डोल्पा, मुगु र हुम्लामा हाल कोरोना संक्रमितको संख्या शून्य छ ।
कर्णालीमा कोरोना संक्रमणका कारण ६ जनाको मृत्यु भएको छ । प्रदेशमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको दर शून्य दशमलव २३ प्रतिशत मात्र छ । संक्रमित दुई हजार पाँच सय ९८ पुग्दा ६ जनाको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमध्ये पाँच जनाको भने मृत्युपछि मात्रै कोरोना पुष्टि भएको थियो । लक्षण नभएकाहरूबाट अन्य व्यक्तिमा रोग सर्न सक्ने जोखिम हुन्छ । लक्षणविहीन भए पनि कोरोनाको जोखिम समूह ठानिएका बुढापाका, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएका, सुत्केरी र दीर्घरोगीमा संक्रमण सार्न सक्ने भएकाले उच्च सावधानी अपनाउनुपर्ने चिकित्सकहरूले सुझाएका छन् ।
प्रकाशित मितिः २१ भाद्र २०७७, आईतवार ०६:०६